Mon, Sep 28, 2020 at 12:38pm
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव: क्वारेन्टाइनमा रहँदा के खाने, के नखाने? #आहा खबर# चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका ६ कार्यकर्ता पक्राउ #आहा खबर# मंगलबारदेखि बर्दियामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिने #आहा खबर# मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा ओली-प्रचण्डबीच आज पनि छलफल हुँदै #आहा खबर# कति छ आज सुनचाँदीकाे बजार भाउ ? #आहा खबर# मोरङमा एकैदिन १ सय ३० जनामा कोरोना भाइरसकाे संक्रमण पुष्टी #आहा खबर# टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने ट्रम्पको आदेशमाथि अदालतले लगायाे रोक #आहा खबर# आज देउवाकाे निर्णयविरुद्ध पौडेल समूहले पार्टी कार्यालयमा विरोधपत्र दर्ता गर्दै #आहा खबर# नबिल सेयर कर्जा अब वार्षिक ७.७५ प्रतिशतकाे आकर्षक ब्याजदरमा #आहा खबर# सन्‌राइज बैंकको ५० औं शाखारहित बैंकिङ सेवा अब बाँकेको खजुरामा #आहा खबर# चटपटेको निहुमा बालिका हत्या गर्ने किशोर पक्राउ #आहा खबर# विश्व कोरोना अपडेट : संक्रमितको संख्या ३ करोड ३३ लाख ३ हजार नाघ्यो, २ करोड ४६ लाख ३४ हजारद्वारा स्वास्थ्यलाभ #आहा खबर# बागलुङमा असोजमै पाक्यो सुन्तला, कृषक उत्साहित #आहा खबर# टोखामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८०० नाघ्यो, तीनको मृत्यु #आहा खबर# कोरोना भाइरसले मानिसको दिमागमा आक्रमण गर्दै, स्ट्रोक, मेमोरी लसलगायतका समस्या बढ्दै ! #आहा खबर#
सोमबार, असोज १२, २०७७ साल
एजेन्सी । अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेशमाथि एक न्यायाधिसले रोक लगाएका छन् । ट्रम्पको आदेशपछि टिकटकको नयाँ डाउनलोडमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यो प्रतिबन्ध लागू हुने केही घण्टा पहिले वासिङ्टनका एक ‘डिस्ट्रिक्ट जज’ ले टिकटकको मालिक कम्पनी बाइटडान्सको अनुरोधमा अस्थायी रोक लगाउने आदेश जारी गरे । न्यायाधीशले आदेश जारी गर्नुको कुनै कारण बताएनन् तर यसबारे पछि निर्णय दिने जानकारी दिए । सुनुवाईको क्रममा बाइटडान्सका..
आईतवार, असोज ११, २०७७ साल
काठमाडाैं, ११ असाेज । शिक्षक र विद्यार्थीबीचकाे सिकाई सम्पर्कलाई सहज बनाउन नेपाल टेलिकमले विद्यालय र विद्यार्थीलाई पाठशाला कज 'कोल्स्ड युजर ग्रुप सिम’ निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएकाे छ । टेलिकमले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग समन्वय गरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीचकाे सिकाई सहज बनाउन लागेको हो। नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’..
सान फ्रान्सिस्को, ११ असोज । एप्पलले सम्भवतः आगामी महिना चार वटा मोडलमा नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्नेछ । सार्वजनिक नयाँ रिपोर्टका अनुसार जसमध्ये सबै भन्दा सानो आइफोन ५.४ इन्च डिस्प्ले वाला हुनेछ । एप्पलले उक्त आइफोनलाई ‘आइफोन १२ मिनी’ राखेको छ । त्यसोत, आइफोन १२ को सबै भन्दा सानो आकारको आइफोनको तस्वीर पनि सार्वजनिक गरिएको छ, जहाँ मिनी नाम दिइएको छ ।..
काठमाडौं, ४ असाेज । नेपालमा कात्तिक ८ गतेबाटै ‘क्लिन फिड’ लागु हुने भएकाे छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू अब विज्ञापनरहित प्रसारण हुने भएका हुन् । विगत केही समयदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलका लागि क्लिन फिड लागू गर्ने विषय चर्चामा रहेको अवस्थामा अब भने कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । विज्ञापन ऐन–२०७६ को प्रावधानअनुसार आगामी कात्तिक ८ देखि नेपालमा क्लिन फिड लागू..
शुक्रबार, असोज २, २०७७ साल
काठमाडाैं, २ असाेज । अब युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत कमाएकाे पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै नेपाल ल्याउन मिल्ने भएकाे छ । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशी रकम आर्जन गर्नेहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाटो नभइ अन्य तरिकाले पनि रकम नेपाल भित्र्याइरहेका थिए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत सूचना प्रविधि सम्बद्ध दक्षतारविज्ञताको निकासी, सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरु राखिएबापत प्राप्त हुने रकम तथा खुद्रास्तरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक÷व्यापारिक कारोबारबापत प्राप्त..
काठमाडौं, २ असोज । फेसबुकले म्यासेन्जर प्रयोगकर्ताहरुका लागि ‘वाच टुगेदर’ फिचर सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकको यस फिचर मार्फत् म्यासेन्जर प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो साथीहरुसँग एक साथ भिडियो हेर्न पाउनेछन् । यस फिचरले सबै फेसबुक वाच भिडियोलाई सपोर्ट गर्ने फेसबुकले जनाएको छ । त्यसोत, केही समय अगाडि मात्रै फेसबुकले म्यासेन्जरको लागि स्क्रिन सेयरिङ फिचर पनि सार्वजनिक गरेको थियो । कसरी प्रयोग गर्ने ? फेसबुक म्यासेन्जरमा..
एजेन्सी । अमेरिकामा आउँदो राष्ट्रपति चुनावलाई लक्षित गरेर ह्याकरहरु सक्रिय भएको माइक्रोसफ्टले बताएको छ । रुस, चीन र इरानसँगको सम्बन्धमा रहेका ह्याकरहरुले सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा सामेल भएका व्यक्ति र समूहहरुमा हस्तक्षेप गर्ने कोशिस गरिरहेका माइक्रोसफ्टका टेक फर्मले बताएकाे बीबीसीले जनाएको छ । सन् २०१६ को चुनावमा डेमोक्रेटिक अभियान चलाएर ह्याकरहरुले चुनावलाई लक्षित गरी आफ्ना गतिविधि अघि बढाएका खबरमा उल्लेख..
शनिबार, भाद्र २०, २०७७ साल
काठमाडाैं, २० भदाै । एनसेल आजियाटा लिमिटेड (पहिले एनसेल प्राइभेट लिमिटेड) ले २०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का विद्यार्थीका लागि विशेष अफर ‘पहिलो सिम’ ल्याएको छ । यो योजनामा एसईईका विद्यार्थीले मात्र १ रुपैयाँमा प्रिपेड सिम खरिदका साथै निःशुल्क माइफाइभ सेवा र बोनस डेटाको फाइदा लिन सक्छन् । यो योजना बिहीबार (भदौ १८) देखि लागू भएको एनसेलले जनाएको छ ।..
काठमाडौं, १८ भदाै । कोरोना भाइरसका कारण लागु लकडाउनका कारण विश्वभरको इन्टरनेट स्पीड खस्किएको छ । एम ल्याब यूकेले गरेको विश्व्यापी सर्भेक्षणमा विश्वभर औषत रुपमा ६.३१ प्रतिशतले इन्टरनेट स्पीडमा गिरावट देखिएको हो । लकडाउन अघि २९.३६ एमबीपीएस रहेको विश्वभरको औषत इन्टरनेट स्पीड लकडाउन अवधिमा घटेर २७.५१ एमबीपीएस रह्यो । लकडाउनका कारण विश्वमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट स्पीडको कमी छिमेकी मुलुक चीनमा देखिएको छ..
इस्लामाबाद, १७ भदाै । पाकिस्तानले टिन्डरलगायत डेटिङ एपहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ‘अनैतिक’ र ‘अभद्र’ सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासस्वरुप यो कदम चालिएको पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी (पीटीए)ले जनाएको छ। पीटीएका अनुसार पाकिस्तानी कानुनअनुरुप आफ्ना सामग्री प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण टिन्डर, ग्राइन्डर, सेहाइ, ट्याग्गडलगायत डेटिङ एप्समा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यही कारण युट्युबलाई पनि बन्द गर्ने धम्की दिइएको छ। गत जुलाईमा अश्लील सामग्री फिल्टर गर्न भन्दै..
सिड्नी, १७ भदाै । फेसबुकले अस्ट्रेलियाका प्रयोगकर्तालाई समाचार शेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको छ। यो धम्की अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारले फेसबुक तथा गुगल जस्ता कम्पनीहरूले अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमको समाचार सामग्री राखेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ कानुन ल्याउन गृहकार्य गरिरहँदा फेसबुकले दिएको हो। “यदि यो ड्राफ्ट कानुन बन्यो भने, हाम्रो इच्छा नभए पनि अस्ट्रेलियाका प्रकाशक तथा प्रयोगकर्तालाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार शेयर गर्ने सुविधा बन्द..
आईतवार, भाद्र १४, २०७७ साल
काठमाडौं। हावामा कोरोना भाइरस बाँच्छ कि बाँच्दैन, हावाबाट यो सर्छ कि सर्दैन भन्ने सवालमा लामो बहस चल्यो तर दुविधा अझै कायम छ। यही दुविधाबीच रुसले यस्तो डिभाइस तयार पारेको दाबी गरेको छ कि, डिभाइसले कोरोना भाइरस हावामा छ कि छैन भन्ने यकिन गर्छ। उक्त डिभाइसले कोरोनामात्र होइन, ब्याक्टेरिया, विषालु पदार्थ र हावामा अन्य भाइरसको अस्तित्वसमेत रहेको–नरहेको पत्ता लगाउँछ। यो डिभाइस रुसको..
एजेन्सी । फेसबुकका फाउन्डर तथा सीईओ मार्क जुकेरवर्गले उनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले यो हप्ताको सुरुवातमा एक मिलीशिया समूहको पेजलाई नहटाउँदा गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । उक्त पेजमा अमेरिकास्थित ज्याकब ब्ल्याकको प्रहरीद्वारा हत्या भएपछि हिंस्रक प्रदर्शनबीच सशस्त्र असैन्य नागरिकहरुसँग केनोशामा घुस्नका लागि आह्वान गरिएको थियो । जुकेरवर्गले शुक्रबार फेसबुकमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै केनेशा गार्ड नामको पेजले फेसबुकको नीतिनियमको उल्लंघन गरेको र कैयौं..
काठमाडौं, १४ भदाै । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्प्युनिकेसन लिमिटेडले विद्यमान इन्टरनेट स्पीडमा सुधार ल्याउन टिकटक र अकामाईसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । टिकटकको प्रयोग अत्यधिक बढ्दा र प्रोटोकलमा परिवर्तन हुँदा पटिल्लो समय नेपालको इन्टरनेट इकोसिस्टम नै बिग्रिएको छ । हाल सेवाप्रदायकको कूल अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा टिकटकले मात्रै खपत गर्ने गरेको छ । जसका कारण नेपाल..
शनिबार, भाद्र १३, २०७७ साल
एजेन्सी । दुनियाँ कोरोना कहरमा डुबिरहेका बेला जापानले भने उड्ने कारको सफल परीक्षण गरेको छ। सहज ढंगमा सडकमा गुडिरहेको कार एकाएक आकाशमा उड्न थाल्यो भने मानिस चकित पर्नु स्वाभाविकै हो। यस्तो कारको चाहना नराख्ने को होलारु सडकमा जाम, मानिसको भीडले हैरान कार प्रयोगकर्ताहरुले उड्ने कारको सपना देख्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। यही सपनालाई पूरा गर्ने दिशाका अघि बढेको छ जापान।..
काठमाडौं, १२ भदाै । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको वेबसाइट ह्याक भएको छ । ह्यारी १३३७ को नाममा इण्डियन साइबर ट्रुप्सले याे वेबसाइट ह्याक गरी आफ्नो लोगो अपलोड गरेको छ । ह्याकरले वेबसाइटमा बलात्कारपछी हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी निर्मला पन्तकाे तस्वीर अपलाेड गर्दै ‘सात सय ५० दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि नेपाल सरकार अझ मौन छ । हामी निर्मला पन्तको न्याय चाहन्छौं,’ भन्ने सन्देश..
एजेन्सी । टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) केभिन मेयरले सीईओ नियुक्त भएको तीन महिनामै राजीनामा दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकलगायत चिनियाँ एपले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपेको बताउँदै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि मेयरले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् । टिकटकको स्वामित्वबारे चिनियाँ स्वामीत्वकर्ता कम्पनी बाइटडान्स र अमेरिकी सरकारबीच तिक्तता बढेका बेला डिज्नीका पूर्वप्रमुख समेत रहेका मेयरको राजिनामा आएको हो । पछिल्लो..
मंगलवार, भाद्र ९, २०७७ साल
एजेन्सी । भिडियो एप टिकटकले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दै अमेरिकाले टिकटकलाई प्रतिवन्ध गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएसँगै चिनियाँ लगानीमा संचालित एपले मुद्दा अगाडि बढाएको हो। चीनको बाइट डान्स कम्पनीले संचालन गरेको टिकटकले राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै असर नपारेको दावी गर्दै अमेरिकाको आसन्न निर्वाचनमा चीनविरोधी क्याम्पेनिङका रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको दावी छ। कम्पनीको दावी छ - सरकारले विना कुनै प्रमाण..
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा कम्पनीले ग्राहकका लागि एक सय रुपैयाँ (करसहित १२७.६९ रुपैयाँ)मा सात दिनसम्म ननस्टप यूट्युव र ४ जीबी डेटाकाे अफर दिइरहेकाे छ । ननस्टप यूट्युब फाेरजी नेटवर्कमा उपलब्ध हुनेछ भने अतिरिक्त रूपमा पाएकाे ४ जीबी डेटा सबै नेटवर्कका लागि उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि ग्राहकले *१७१२३*१# डायल गरी याे अफर प्रयाेग गर्न सक्नेछन् । साथै ननस्टप यूट्युव र डेटा प्याक..
शनिबार, भाद्र ६, २०७७ साल
काठमाडौं, ६ भदाै । नेपाल टेलिकमले विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि एसईईका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यार्थी अफर प्याक सहितको सिम नेपाल टेलिकमका देशभर रहेका काउन्टरहरुबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै यदि कुनै विद्यार्थीसँग पहिलेदेखि नै नेपाल टेलिकमको सिम छ भने त्यही सिममा अफर उपलब्ध गराउने व्यवस्था टेलिकमले गरेको छ । नयाँ सिम लिनका लागि विद्यार्थीहरुले..
शुक्रबार, भाद्र ५, २०७७ साल
काठमाडौं, ५ भदाै । लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले शिक्षक र विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘एजुकेटर हब’ सुरु गरेको छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनलाइन कम्युनिटी बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनीले यस्तो फिचर ल्याएको हो । जहाँबाट कक्षाका लागि आवश्यक विभिन्न उपयोगी सामग्रीहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ । कोरोनाका कारण अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले महिनौंदेखि कक्षा सञ्चालन..
बुधबार, भाद्र ३, २०७७ साल
काठमाडौं। फेसबुक जनस्वास्थ्यको लागि ‘खतरा’ भएको एक अध्ययनले बताएको छ। अमेरिकी अनुसन्धान समूह ‘आवाज’ले गरेको अध्ययनअनुसार गतवर्ष मात्र फेसबुकमा ८० लाखभन्दा बढी सूचनाहरु पोस्ट भएका थिए, जुन स्वास्थ्यको बारेमा गलत जानकारी थिए। कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ महामारीको समयमा झनै बढी गलत स्वास्थ्य जानकारीहरु सम्प्रेषित भएको आवाजको भनाइ छ। गलत सूचनाले करोडौं मानिसलाई गलत कदम चाल्न सक्ने भएकाले फेसबुकले करोडौंको स्वास्थ्यमा खेलवाड..
आईतवार, श्रावन ३२, २०७७ साल
काठमाडौं, ३२ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अलिबाबासहितका अन्य चिनियाँ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताएका छन् । अमेरिकामा टिकटकको सेवा बन्द गर्न बाइटडान्सलाई ९० दिनको म्याद दिएसँगै ट्रम्पले अन्य चिनियाँ कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताएका हुन् । शनिबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीको क्रममा उनले अलिबाबासहितका अन्य कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा विचार गरिरहेको बताएका हुन् । पछिल्लो समय ट्रम्प चीनको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीमाथि..
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ठूलो रकम रिचार्ज कार्ड विक्रेतालाई छुट दिएको छ । टेलिकमले पहिलोपटक गत आवमा ८५ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रिचार्ज कार्डबापत छुट उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । यसअघि रिचार्ज कार्ड विक्रीमा कमिसन उपलब्ध गराउँदै आएकोमा टेलिकमले गत आवदेखि छुट उपलब्ध गराउन थालेको हो । यसरी छुट दिँदा टेलिकमको आम्दानीमा..
बिहिवार, श्रावन २९, २०७७ साल
काठमाडौं, २९ साउन । कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसारका धेरै देशहरु लकडाउनमा छन् । तर वैज्ञानिक भाषामा भन्नुपर्दा संसारलाई उज्यालो बनाउने सूर्य विगत ११ वर्षदेखि नै लकडाउनमा थियो । अन्ततः अहिले सूर्य लकडाउनबाट बाहिर निस्किएको छ, अर्थात् सूर्य जागेको छ । सूर्यमा एउटा विशाल धब्बा अर्थात् सौर्य धब्बा देखा परेको छ । उक्त धब्बा यति ठूलो छ कि यसबाट निस्कने सौर्य..
आईतवार, श्रावन २५, २०७७ साल
काठमाडाैं, २५ साउन । माइक्रो बल्गिङ साइट ट्वीटरले चिनियाँ एप टिकटकको अमेरिका संचालन अधिकार किन्न चासो देखाएको छ। रोयटर्सले यस मामिलासँग जानकार भएका दुई जनाको हवाला दिदैं ट्विटरले टिकटकको चिनियाँ माउ कम्पनी बाइटडान्ससँग चासो राखेको समाचार प्रकाशित गरेको छ। यध्यपी विज्ञहरूले भने टिकटक खरिदका लागि ट्विटरको वित्त क्षमतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्। टिकटिकको अमेरिका संचालन किन्न माइक्रोसफ्टले यसअघि नै चासो देखाइसकेको..
काठमाडौं, २५ साउन। निजी लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) टाट पल्टिएपछि कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गरी दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १८ वर्षअघि यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको थियो। सुरुमानेपाल टेलिकमको विकल्पका रूपमा रुचाइएको यो कम्पनीले छोटो समयमै अत्यधिक उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सफल भएको थियो। तर व्यवस्थापनमा आएको समस्याले धरासायी भई अन्ततः कम्पनी नै बन्द भयो। लगानीकर्ताको बेवास्ताका कारण..
शुक्रबार, श्रावन २३, २०७७ साल
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वामित्व परिवर्तन नगरे ४५ दिनभित्र टिकटक बन्द गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ कम्पनी बाइटडेन्सले टिकटकको स्वामित्व नबेचे ४५ दिनभित्र अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। ट्रम्पको उक्त आदेशमा ‘अमेरिकाले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न टिकटक सञ्चालकहरूविरूद्ध आक्रामक कारबाही गर्नुपर्नेछ’, उल्लेख छ। विदेशीको स्वामित्वमा रहेको टिकटक अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन..
काठमाडौं, २२ साउन । फेसबुकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक पोष्ट डिलिट गरिदिएको छ । कोरोना भाइरसबारे ट्रम्पले गरेको पोष्टलाई फेसबुकले पहिलो पटक डिलिट गरेको हो । फेसबुक कम्पनीका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गलत सूचना सेयर गरेकाले त्यसलाई डिलिट गरिएको हो । ट्रम्पले स्टाटसको साथमा फक्स न्युज च्यानललाई दिएको अन्तरवार्ताको एक भिडियो क्लिप पनि राखेका थिए । त्यो भिडियोमा ट्रम्पले भनेका छन्- कोरोना भाइरसबाट..
आईतवार, श्रावन १८, २०७७ साल
काठमाडाैं, १९ साउन । ३ करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ४ करोडभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण भएपछि दूरसञ्चार पहुँच तथ्याङ्कमा शत प्रतिशतभन्दा बढी देखिन थालेको धेरै भयो । सेवा विस्तारको प्रतिस्पर्धामा सेवा प्रदायकले सिमकार्ड वितरणलाई बजार हिस्सा मान्न थालेपछि पछिल्लो एक वर्षयता मासिक तीन लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण हुन थाल्यो । तर सिमकार्ड बिक्रीमा दिनानुदिन बढ्दो ग्राफ यतिबेला भने तल झर्न थालेको छ ।..
Results 826: You are at page 1 of 28
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव: क्वारेन्टाइनमा रहँदा के खाने, के नखाने?
कति छ आज सुनचाँदीकाे बजार भाउ ?